Somaliland: ukuumadda Somaliland ayaa hanbalyeysay dawladda Kenya oo ku guulaysatay taageerada midowga Afrika oo ah in Kenya xubin aan joogto ahayn ka noqoto golaha ammaanka ee Qaramada midoobay. - Wargane News
Home Somali News Somaliland: ukuumadda Somaliland ayaa hanbalyeysay dawladda Kenya oo ku guulaysatay taageerada midowga...
Somaliland: ukuumadda Somaliland ayaa hanbalyeysay dawladda Kenya oo ku guulaysatay taageerada midowga Afrika oo ah in Kenya xubin aan joogto ahayn ka noqoto golaha ammaanka ee Qaramada midoobay.
Xukuumadda Somaliland ayaa hanbalyeysay dawladda Kenya oo ku guulaysatay taageerada midowga Afrika oo ah in Kenya xubin aan joogto ahayn ka noqoto golaha ammaanka ee Qaramada midoobay. Wakiilka Somaliland ee Kenya Baashe Cawil Cumar ayaa yidhi.”Waxaan hambalyeenaynaa Dawlada Kenya oo ku guulaystay taageeradii Afircan Union ee kursiga wareega ee UN Security Council”.
Kenya ayaa ka guulaysatay waddanka Jabuuti oo ay la tartamaysay.
Somalia: ‘Deficiencies’ to blame for failure in Al-Shabaab war, US military chief says
Dawladda Iran oo lagu cambaareeyay “dhiirrigelinta” dhalmada
Somaliland: Xukuumadda Oo Ka Jawaabtay Warbixintii Dawladda Turkigu Ku Weerartay Qaranimada Somaliland.